musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Chinese E-Commerce Giant yekumisikidza Nyowani Ndege
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • China Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Shopping • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
JD.com muvambi Richard Li
Iyo setup yendege nyowani yendege inouya seyeJD.com yemhepo yekutenga inokwikwidza Alibaba Boka Kubata LTd yanga ichiwedzera ngarava dzayo. YTO Cargo Airlines, muridzi weAlibaba-yakatsigirwa YTO Express, iri kuunza vatakuri venhumbi vakashandurwa kubva ku767 uye 777 ndege.
Ndege nyowani yekutakura ichave yakavakirwa mudunhu reChina rekumabvazuva kweJiangsu.
Jiangsu Jingdong Cargo Airlines yawana mvumo yekutanga yekumisikidza mutakuri mutsva.
Iyo yendege iri kuronga kushandisa Boeing 737-800 ndege dzayo ngarava.
The Civil Aviation Administration yeChina (CAAC) yakazivisa kuti Suqian Jindong Zhanrui Enterprise Management, inodzorwa ne JD.com muvambi Richard Liu, akapihwa mvumo yekumisikidza yendege nendege nyowani iri mudunhu rekumabvazuva kweJiangsu.
Jiangsu Jingdong Cargo Airlines, ine mari yakanyoreswa yemamiriyoni mazana matanhatu emamiriyoni ($ 600 mamirioni), yawana mvumo yekutanga yekumisikidza mutakuri mutsva, mutyairi weaviation weChina akataura muchiziviso.
Kambani inodzorwa nemuvambi weChina e-commerce hofori JD.com Inc.inopa 75% yemari yekuvamba nepo Airport Group muNantong, guta riri muJiangsu, ichapa zvimwe zvese, sekureva kweCAAC.
Sekureva kwechinyorwa cheCAAC, ndege nyowani iri kuronga kushandisa ndege yeBoeing 737-800 yezvikepe zvayo.
Boeing, iyo yanga ichinetseka muChina nekutengesa ndege dzevanofamba, inotonga musika wepasi rose wekutakura.
Mitero yekutakura nendege yakakwira, ichitungamirwa muchidimbu nekuwedzera kwehosha-inowedzera yekutenga pamhepo.